Qwilr: Platform Design Platform na -agbanwe ahịa na azụmaahịa azụmaahịa | Martech Zone
Qwilr: Platform Design Platform na -agbanwe ahịa na nkwakọ ngwaahịa ahịa
Tọzdee, Disemba 17, 2020 Tọzdee, Disemba 17, 2020 Mark Tanner
Nkwukọrịta ndị ahịa bụ mkpà nke azụmahịa ọ bụla. Otú ọ dị, iji COVID-19 na-amanye mmefu ego 65% nke ndị ahịa, a na-ekenye ndị ọrụ ime obere ihe. Nke a pụtara ịnwe ike iwepụta azụmaahịa na azụmaahịa niile na mmefu ego belata, na oge na-enweghị okomoko nke onye mmebe ma ọ bụ ụlọ ọrụ iji mepụta ya.
Ime na ire ere na-apụtakwa na ndị otu na-ere ahịa na azụmaahịa enweghị ike ịdabere na nka nkwukọrịta nke mmadụ iji zụlite ma bulie ndị ahịa gị elu. Enwere ọchịchọ ka ukwuu maka nkwekọrịta na akwụkwọ iji dochie ihu iji kwurịta okwu
N'oge dị ka nke a, ịdị mma nke nkwukọrịta, yana akụ azụmaahịa so ya nwere ike ịbụ ihe dị iche na azụmaahịa inweta, ijide ma ọ bụ tufuo ndị ahịa. Ugbu a karịa mgbe ọ bụla, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịkwalite ogo nke akụ dijitalụ ha iji nyere azụmaahịa ahụ aka ikwupụta okwu bara uru ma weta echiche okike dị ndụ.
Nkwakọ ngwaahịa ọ ga-abụ ihe ịma aka. Enwere ike ịkọwa echiche dị ịtụnanya n'ihi nkwukọrịta na-adịghị mma, mpempe akwụkwọ adịghị ike, ma ọ bụ na-ahọrọ a otu kacha dabaa ndebiri. Nke a na eme ka mmekọrịta gị na ndị ahịa ma ọ bụ ndị dị ugbu a adịchaghị mma, enweghị ike ịkọwapụta ya, na enweghị nghọta.
Na-ewepu Nhazi Akwụkwọ Ogbenye
Tupu COVID-19 na-ebugharị mgbanwe na-arụ ọrụ n'ime ime, a na-emezigharịrị ngwa ọrụ ngwa ọrụ oge ochie. Mana ngwangwa maka ọrụ dịpụrụ adịpụ pụtara na atụmanya azụmaahịa na-agbanwe, na teknụzụ ụlọ ọrụ ahụ, ọkachasị maka ihe ndị dị ka imepụta akwụkwọ, chọrọ ịnwekwu ikike iji kwado ụzọ ọhụrụ eji ere ahịa site na anya.
N'agbanyeghị nke ahụ, site na ịgwa ndị otu okwu, achọpụtara m na ọtụtụ ka na-edozi maka ịhazi ụlọ akwụkwọ ochie ma ọ bụ atụmatụ ndebiri ume na iji mkpụrụedemede dị mfe na mado iji chekwaa oge. Ha na-ezigakarị ndị a site na PDF.
N’afọ gara aga, ọ bụ sọsọ sọftụwia Adobe mepere PDFs narị abụọ na iri ise na ise.
Mgbe ị na-eche banyere ya, ọ bụ ihe ịtụnanya na azụmaahịa ka na-ezipụ ọlụ kacha mma ha na akwụkwọ static, nke anaghị ekwe gị dezie ya mgbe izipụchara ya (ọ bụrụ na ịchọrọ - nke na - eme mgbe niile!) Ma ọ bụ hụ mgbe onye ahịa ahụ meghere akwụkwọ ahụ site na nchịkọta akwụkwọ gị.
Iwuli Ihe Ngwọta
Akwukwu bụ a akwụkwọ imewe na akpaaka ngwá ọrụ na-agbanwe ụzọ ahịa na ahịa otu na-ekwurịta okwu na ndị ahịa ha isi. Ewubere ya dị ka ihe ngwọta nke nsogbu ndị dị ugbu a na-eche ụlọ ọrụ ahịa na ahịa, ya bụ nke ụzọ nkwukọrịta na-adịghị mma, nke ochie.
Anyị ghọtara PDFs na Office Suite akwụkwọ anaghị egbutu ya n'oge a, mana ịgagharị ngwaọrụ nke imewe dijitalụ nwere ike ịbụ ihe ịma aka maka onye na-esepụta ihe osise kwa ụbọchị. Ya mere, anyị wepụtara iji mee ka ikpo okwu dị mfe ma kensinammuo nke ga-eme ka ndị na-ere ahịa chepụta atụmatụ, nkwuputa, ngwaahịa otu peeji, na ndị ọzọ. Akwụkwọ ọ bụla na-adọrọ adọrọ ma dị mfe ịmepụta, iji mee ka atụmanya na-arụ ọrụ.
Iji Data Iji Mee atụmatụ atụmatụ
Ka nzukọ na-aga n'ịntanetị, ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa enweghị ike ịdabere na asụsụ ahụ iji chọpụta etu ụda olu gafere, ma ọ bụ nata nzaghachi oge na-ezigara ya.
Mana nke ka mkpa, ịghọta akparamaagwa dị n’azụ omume ndị ahịa bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-ewu Qwilr. Nke a kwesịrị ịkọwa ihe niile gbasara ịga ahịa na akuko. Ngwaọrụ Qwilr bịara juputara na ọrụ nyocha dị elu ma nwee ike ikpughe nkọwa ndị agbaghara site na mmekorita arụmọrụ. Nke a gụnyere ikike ịmara oge na ebe onye nnata ahụ meghere akwụkwọ ahụ, kedu ngalaba ha nọrọ oge dị ukwuu, na-agwa ndị na-eso ụzọ na atụmatụ ahịa ọzọ.
Nọgide Na-enwe Mmetụta
Na a ubi dị ka ahịa, ebe ika njirimara na visuals bụ ihe niile, ọ dị mkpa iji gosipụta ihe anya maka zuru ezu na aesthetic nri si na-aga. N'ọtụtụ ọnọdụ, ogo nkwukọrịta na-adịkarị mkpa karịa echiche gị, ọkachasị mgbe ị na-ere ọrụ na echiche na-enweghị atụ. Ndị ahịa nwekwara ike icheta ozi sitere na anya site na ogologo ederede.
Ike Qwilr dị mfe, na ikpo okwu na-abịa juputara na ndebiri dị mfe iji, yana mwube ụlọ dị iche iche iji mepụta akwụkwọ ndị na-egbu maramara ngwa ngwa. Nke a na - eme ka ọ dịkwuo mfe ijikwa nkwukọrịta ụlọ ọrụ gị n'ofe otu, weghachite atụmatụ na echiche gị kachasị mma mgbe ị ka nọ na akara.
Ndị na-ere ahịa ejirila Qwilr mee ihe ọ bụla nke njem ndị ahịa, site na ịtụ anya na imechi ahịa na ọrụ na-aga n'ihu. A na-ahụ nke a n'otu ihe atụ na njikwa njikwa mmefu, Abacus, na-eji Qwilr iji gosipụta atụmatụ azụmaahịa ọhụrụ maka online na-ere ahịa Kangaroo Shoes, ndị na-achọ ịbawanye ahịa ahịa ha.
Ha Qwilr amaghị gụnyere ọtụtụ ọrụ gafee akara, atụmatụ ọdịnaya, na ịkọwapụta, ha jikọtara n'otu ikpo okwu. Nke a mere ka ọ dịrị ya mfe ijikwa nkwukọrịta ụlọ ọrụ n'ofe otu niile, weghachite ọrụ gị kachasị mma, ma nọrọ na akara. Site na iwepu oge nkwukọrịta akwụkwọ ntuziaka na akụrụngwa na-enweghị ọrụ, ịnwere ike itinye ụkwụ ọkachamara gị kachasị mma, oge ọ bụla.
Gbalịa Qwilr n'efu
Tags: adobeika ahịa akwụkwọika ahịa amaghị naakwụkwọ mmekotandebiri ndebiri@IGIHEakwụkwọ ahịa na ahịaimepụta akwụkwọ ahịankwanye ahịaimepụta atụmatụ imepụtaahịa amaghị softwareAmụma Ahịa
Dị ka onye nchoputa na COO, Mark na-achịkwa ahịa na arụmọrụ Qwilr, wee nyere aka rụọ otu ndị otu ahịa zuru ụwa ọnụ, zuru ụwa ọnụ. Na Google, o nyere aka mepụta ọtụtụ mmekọrịta ndị na - ebipụta akwụkwọ nke dugara na Google Play Books na ebook na gam akporo. Ọ laghachiri Australia na 2013, wee bido Qwilr na ngalaba-nchoputa Dylan Baskin iji weghachite nkwukọrịta azụmahịa site na akwụkwọ.
Ihe kpatara ị ga - eji nwee ike ịnwe azụmaahịa B2B bụ naanị ụzọ na - aga n’ihu maka ndị nrụpụta na ndị na - eweta ngwaahịa Bipute COVID-19
Data Behavioral Data: Ihe Nzuzo Kachasị Mma iji Kwụsị Chord Kwesịrị Ekwesị na Gen Z